“Saddex goor buu Muuse Biixi Maxamad Kaahin dilay.” Ex Wasiir Maxamuud Aadan Jaamac “Galaa | Yool News
“Saddex goor buu Muuse Biixi Maxamad Kaahin dilay.” Ex Wasiir Maxamuud Aadan Jaamac “Galaa
October 13, 2021 - Written by Yool News
Wasiir Maxamad Kaahin waa mujaahid meel weyn kaga qoran taariikhdii halganka dalkan lagu xoreeyey. Waa nin hayin ah oo xishooda. Waa nin xalaal cun ah oo afartii sannadood ee uu xilka wasiirnimo hayey xoolihii ummadu ka nabad galeen isaga iyo qoyskiisaba. Waa nin ixtiraam shacab weynaha Jamhuuriyadda Somaliland ka mudan. Laakiin waa nin la dilay oo Madaxweynaha JSL Muuse Biixi Cabdi dhagar siyaasadeed ka galay.
Seddex goor buu Muuse Maxamad dilay. 1) Deegaankiisii buu ku dilay, 2) maamulkii Wasaaradda Arimaha Gudaha ayuu ku dilay, 3) Xisbigii Kulmiye ayuu ku dilay. Looma baahna in tafaasiil laga bixiyo siyaabaha uu Madaxweynuhu saxiibkii ku dilay oo arimahaas inta og baa badan. Sidaa daraadeed uma guda gelayo qaabka Mujaahid Maxamad deegaankiisa iyo wasaaradda loogu dilay walow ay saddexda qodobba xidhiidh leeyihiin, marka laysu darona ay saamayntoodu sii qaro weyntahay.
Ta xisbiga Kulmiye ayaan dhowr qodob idiinka iftiiminayaa. Ugu horayn waxay ahayd markii 2017 la doortay in Madaxweyne Muuse xisbiga iska wareejiyo. Hadday taladaasi seegtayna uu shirweynihii xisbiga ee November 2020 aanay la dhaafin. Labadaba wuu seegay waxaanay taas iyo siyaasadiisii guud sababtay in xisbiga iyo taageerayaashiisii ka soo jeeday deeganka Wasiir Maxamad ay is waayaan, ka dibna kala fogaadaan. Kala fogaanshahaasi waxuu noqday mid aan laga soo kaban karin gaashaanbuurtii siyaasadeed ee xisbiga Kulmiyena ku baabado.
Goobta uu garnaqsigaasi ku habboonaa waa xafiiska Madaxweyne Muuse Biixi xiliga gartaasi macno yeelan lahaydna waa 2017/2018. Maanta waxa bedka yaala xisbi sida cawsha looga kala yaacay oo sakaraatal mowtkii la rafanaya. Waxaan Wasiir Maxamad ku odhan lahaa dhiibista xisbigu waa “poisoned chalice” ee ka fogow. Gacmahaaga yuu ku dhimane. Waa iga talo.
Maxamuud Aadan Jaamac “Galaal”